La shaqeynta Tommy Hilfiger iyo 'waa ragga' xilligan | Ragga Stylish
Sawirka meeleynta Carlos Rivera | | nololeedka, Isbeddellada
Ku soo aadaya Uruurinta London: Ragga, shirkadda Mareykanka Tommy Hilfiger qabtay xaflad ay isugu keentay matalaad aad u wanaagsan oo ah waa rag xilligan. Munaasabad ay iska kaashadeen majaladda GQ oo looga hadlay moodada iyo Palmetto sartorial ah.
Martida xafladan casho-sharafta ah waxaa ka mid ahaa Dylan Jones, agaasimaha majaladda GQ, heesaa iyo muusikiiste Dougie Poynter iyo moodellada Oliver Cheshire, David Gandy iyo Andrés Velencoso, iyo kuwo kale. Waxaan falanqeyneynaa dharka martida xafladan gaarka ah.
Munaasabada ayaa uqalantay qof walbana wuxuu soo saaray qaabkiisa epicurean. Intooda badani waxay doorteen suudhka sida dharka xiddigta, in kastoo qaar badani u ciyaareen inay isku daraan blazer iyo surwaal dharka. Xaqiiqdu waxay tahay hawada Qalabaynta ku guuleystey xafladan loogu dabaaldegayey guusha moodada ragga ee a todobaadkii fashion si gaar ah loogu talagalay soo jeedinta qalabkan iyo in si wadajir ah Paris iyo Milan ay metelaan seddexda heer ee ugu waawayn ragga adduunka.
Inta udhaxeysa aniga looks ugu cadcad, waxaan ku dhejinayaa sharadka caadiga ah laakiin taabasho badan ayaan qabaa hore loo diyaariyey waxaa qoray Johannes Huebl. Ganacsadaha iyo moodeelka ayaa doortay a Suudh daaqad leh oo cawl buluug ah oo buluug ah oo isku dhafan oo lagu xidho xarka silk.
Sidoo kale waxaa ka soo dhex muuqday dadkii badnaa qoob ka ciyaarka baleedka Eric Underwood, oo ay weheliyaan iskudhaf isku mid ah oo Tommy ah buluug koronto buluug ah oo labalabeysan, surwaal cas iyo tababarayaal.
Kuwa kale ciyaaraha aad u guuleystey wuxuu ahaa kii supermodel-ka David Gandy, Ingriiska wuxuu doortey wax fiican seddex gabal oo gunta ah Ciidamada badda leh kuleyl dhameystiran iyo labo laab oo shaashadda lagu hubiyo.
Dhiniciisa, qaabka Isbaanishka iyo jilaaga Andrés Velencoso wuxuu doortay inuu ka tago xariggiisa guriga wuxuuna doortay sasabasho Suudh badeedka oo lagu daray kun shaadhadh shaati ah, waxaa kor u qaaday a sax xiiray leh timo jaban oo run ah xannaanaynta carruurta Taas oo uu ku garaacay barta oo uu ka istaagay badhtanka badda Mediterranean iyo furaha labka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » La shaqeynta Tommy Hilfiger iyo 'waa ragga' xilligan
Dharka asliga ah ee xagaaga xagaaga
Timo luminta: astaamaha, noocyada iyo sida looga hortago